2013 August | MoeMaKa Burmese News & Media
Wunt Hmone – Illegal Land Transfer in Burma
Illegal Land Transfer – အလုပ်ဖြစ်နေဆဲအိမ်မြေဈေးများ ၀တ်မှုန် (၀န်ထမ်းဟောင်းတဦး)၊ စက်တင်ဘာ ၁၊ ၂၀၁၃ ရန်ကုန်မြို့တွင်းရှိလမ်းမဘေးတိုက်ခန်းများ (၂၀၁၃)ဘာကြောင့်မှန်းတော့မသိပါ။ အသက်ကြီးလာလို့ဟုထင်ပါသည်။ လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအဖြစ်ပျက်အများစုမှာ ကြေနပ်တာစရာများပါသည်။ အခုကိစ္စကိုတော့ အချိန်ယူ (နှစ်နဲ့ချီပြီး) ရှင်းရမဲ့ကိစ္စဖြစ်သည်။...
Maung Oo – The past, 93 silver evening
“၉၃ ငွေရောင် ညနေ”မောင်ဦး။ သြဂုတ် ၃၁၊ ၂၀၁၃ ယနေ့(၃၀ သြဂုတ် ၂၀၁၃ သောကြာနေ့) နံနက် ၁၁ နာရီခန့်တွင် ဖုန်းဝင်လာသည်။ ဘယ်သူလဲကြည့်လိုက်တော့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆီက။ “ဟေ့ကောင် ဒီနေ့ ကုလားတို့ပွဲရှိတယ်။...
အ မှု ကာတွန်းအောင်မော် သြဂုတ် ၃၁၊ ၂၀၁၃ ကာတွန်းအောင်မော်ဖေ့ဘုတ်ခ်မှ ပြန်လည်ကူးယူပါသည်။
ချင်းရောင်ခြည် သြဂုတ်လထွက်ပြီ SK ရှန်လိမ်း သြဂုတ် ၃၁၊ ၂၀၁၃ ချင်းဗုဒ္ဓသာသနပါလအဖွဲ့က ချင်းရောင်ခြည် ဗုဒ္ဓဓမ္မမဂ္ဂဇင်းကုို ၃ လတကြိမ်ထုတ်ဝေ၍ ဓမ္မဒါနပြုလျက်ရှိရာ ၂၀၁၃ သြဂုတ်လထုတ် မဂ္ဂဇင်းထွက်ရှိလာသည်။ ကဗျာကဏ္ဍတွင် အညတြလုလင် –...
Saw Ngo – 25 years and still holding on power …
ကာတွန်းစောငို – အာဏာမလွှဲပေးလဲ ငွေရတုပွဲလုပ်ကြတာပဲ … တဲ့ သြဂုတ် ၃၁၊ ၂၀၁၃
မိုးမခ Home Entertainment’s Motion Magazine Vol2– part 5
မိုးမခ Home Entertainment’s Motion Magazine Vol2မိုရှင်းမဂ္ဂဇင်း နံပါတ် ၂ – (၅) လေခွန်၊ တကုိုယ်တော်လူရွှင်တော်ကွက်စိတ် ( မိုးမခမီဒီယာက ပြန်လည်ကုူးယူတင်ဆက်သည်) မိုးမခရုပ်သံ၊ သြဂုတ်...
Ku Mo Jo – Control of Burma …
ကာတွန်း ကူမိုးကြိုး – ကာလုံ ရှင်းမှ လင်းလိမ့်မည် သြဂုတ် ၃၁၊ ၂၀၁၃
Metta Shin Sayadaw U Zawani Dhamma Talk – 1st Sept, Sacramento
မေတ္တာရှင် ဆရာတော် ဦးဇ၀န စက်တင်ဘာ ၁၊ တရားပွဲ၊ သာသနဂုဏ်ရည်ကျောင်း၊ Sacramento မိုးမခရွာဆော်ကြီး၊ သြဂုတ် ၃၀၊ ၂၀၁၃
နောက်ဘုရင် ရှင်းလိမ့်မယ် ကာတွန်း – အောင်မော် သြဂုတ် ၃၀၊ ၂၀၁၃ ကာတွန်း အောင်မော်ဖေ့ဘုတ်ခ်မှ ပြန်လည်ကူးယူပါသည်။
ှShin Sandardika – Articles
အလှနဲ့ ဓမ္မ ရှင်ဆန္ဒာဓိက (ပေလေးပင်နတ်မှီတောရ) သြဂုတ် ၃၀၊ ၂၀၁၃ (ဒီဇာတ်လမ်းကို လုံးစေ့ပြန်ဆိုခြင်းမဟုတ်ပဲ ဇာတ်လမ်းကျောရိုးကိုယူပြီး ခံစားတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။) ဗုဒ္ဓသာသနာဝင် ဂျပန်ဘိက္ခုနီမ တစ်ဦးဖြစ်သူ “ရီယိုနင်”ရဲ့ မွေးခုနှစ်က ၁၇၉၇-ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဘကြီး...
တမိုးလုံးဖျောက်ဆိပ် နုိုင်ဦးညို (ဖုိုးဇီးရုိုး) သြဂုတ် ၃၀၊ ၂၀၁၃ တိုက်စစ်မှူး ဆိုတာလည်း သူတို့၊ ကီးပလေယာ ဆိုတာလည်း သူတို့၊ ပလေးမိတ်ကာ ဆိုတာလည်း သူတို့၊ နောက်ချန်ခံစစ်မှူး ဆိုတာလည်း သူတို့၊ ဂိုးကီပါ...
Maung Luu Pay – Essay
နိုင်ငံခြားက ပြန်ခဲ့တယ် မောင်လူပေ သြဂုတ် ၃၀၊ ၂၀၁၃ မောင်လူပေတို့ငယ်စဉ်က နိုင်ငံခြားပြန်ဆိုတာ အတော်ရှားခဲ့ပါတယ်။ အစိုးရဝန်ထမ်း အရာရှိ အချို့ သာ ပညာတော်သင်သွားရင်း နိုင်ငံရပ်ခြား ရောက်ဖူးကြပါတယ်။ သူတို...
သုံးေ ယာက် သစ်ကောင်းအိမ် သြဂတ်စ် ၃၀၊ ၂၀၁၃ ရဲရင် မင်းဖြစ်တယ်ပြောသူကပြော ကြိုးစားရင်ဘုရားတောင်မှ ဖြစ်တယ်လုို့ …. ဆုိုသူကလည်းဆုို ဖြစ်နုိုင်ရင် တုို့နှစ်ယောက်အချစ်နဲ့ ကမ္ဘာကြီးကုို...
ကုိုရီးယားက ကွမ်းကမ်ပိန်း မုိုးမခ သြဂုတ် ၃၀၊ ၂၀၁၃
Saw Ngo – All Generals in Burma …
ကာတွန်းစောငို – ဗိုလ် ဗိုလ် ချင်း ခြေမြင် သြဂုတ် ၃၀၊ ၂၀၁၃
Min Kyaw Khine – Me and My Musician Heroes
ကျနော်နဲ့ ဂီတသူရဲကောင်းများ မင်းကျော်ခိုင် (Artist)၊ သြဂုတ် ၃၀၊ ၂၀၁၃ (မိုးမခအတွက် ငြိမ်းချမ်းအေး စုစည်းတင်ဆက်သည်) ဝဲမှယာ – ကိုနေဝင်း၊ ခင်မောင်တိုး (၁၉၅၀-၂၀၁၂)၊ ကိုရဲလွင်၊ ကိုမောင်မောင် (၁၉၄၉-၁၉၉၅) ဓာတ်ပုံ...